Madaxweyne Farmaajo oo maanta saxiixay Sharciga Naafada Qaranka – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo maanta saxiixay Sharciga Naafada Qaranka
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa goor dhaw saxiixay Sharciga Dhismaha Hay’adda Naafada Soomaaliya. Xarunta Villa Soomaaliya munaasabad lagu qabtay, oo ay ka qeyb galeen Golayaasha Dowladda iyo Xubno ka socda Naafada Qaranka, ayuu Madaxweynuhu ku saxiixay hindisahan oo maanta isu beddelay Xeer Qaran, oo ka mid noqon doona shuruucda dalka.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu Golayaasha Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Xubno ka tirsan Naafada Dalka hortooda ku saxiixo maanta Sharciga Dhismaha Hayadda Naafada Qaranka. “Xaqiiqatan, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Baarlamaanka sharafta leh, sida deg degga ah ee ay lix bil gudaheed ugu ansixiyeen in sharcigaan ay maanta ii suurtagasho inaan saxiixo” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in ahmiyadda ugu weyn ee uu Sharciga Naafada Qaranka xambaarsan yahay ay tahay in la daryeelo dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan, gaar ahaan naafada. “Waxaan dooneynaa inaan xaqiijino xuquuqda ay ummaddooda iyo dowladdooda ku leeyihiin” ayuu yiri Madaxweynaha Dalka, Madaxmed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in qof kasta oo jir ahaan ama maskax ahaan naafa ah ay masuuliyadi ka saaran tahay dowladda.
“Waxaa intaas dheer oo aan rabnaa inaan u xaqiijino waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada, oo aan sii xaqiijino in marka ay waxbarashadooda dhameystaan ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan” ayuu Madaxweynuhu ku yiri madaxdii, masuiyiintii iyo ka qeybgalayaahii kale ee munaasabadda uu maanta ku saxiixay Xeerka Naafada kula hadlay. Waxa uu sheegay iney si gaara ula socon doonaan shaqaaleysiinta naafada.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in waxa uu tilmaamay inuu rabo iney dowladdiisu u qabato naafada ay dowladda uga dambeyn doonto Hay’adda Naafada Qaranka, oo uu soo dhisayo sharciga uu maanta saxiixay. “Hawshaasna waxaa u xilsaaran Hay’adda Naafada, oo ay dhismaheeda masuul nooga tahay Wasiiraddeena” ayuu yiri Farmaajo. “Waxaan ku boorinayaa Wasiiradda in ay Dhismaha Hay’adda Naafada ka tala-geliso naafada” yuu Madaxweynuhu sii raaciyey hadalkiisa.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso hay’addaas, oo uu faray in si fiican loo qalabeeyo, loona magacaabo madax ka tirsan Naafada oo aqoon, xirfad iyo karti u leh firfircooni gelinta hay’addaas, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay iney dowladdiisu dareenkeeda u jeeddo caawinta naafada, “si aan ugu dhawaano Illaahey” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Xildhibaan Korneel Ruush oo maanta Muqdisho loogu sameeyey Aas Qaran
Aqalka Sare oo si aan rasmi ahayn uga dooday Miisaaniyadda 2019-ka oo uusan hayn